ရှည်လျားသောသံမဏိမြက်ခင်းထွန်ခြစ်ကိုငျတှယျ - တရုတ် Richina
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: CV ကို-029
ယေဘုယျအား Length: 160cm
အလင်းဥယျာဉ်ကိုအပျက်အစီးများ collectiong များအတွက်စံပြရိုးရာအင်္ဂလိပ်စတိုင်မြက်ခင်းထွန်ခြစ်နှင့်မြက်ခင်းပြင်ကနေရေညှိဖယ်ရှားပစ်ရန်လည်းသုံးနိုင်တယ်
သစ်မာ သာ. ကြီးသက်တမ်းများအတွက်ကိုငျတှယျ
20 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျနော်တို့ tools တွေအမျိုးမျိုးတို့ကိုအထူးသဖြင့်အထူးပြုနေကြသည် ဥယျာဉ်တော် Tools များ , stainless တူးလူတွေနှင့်ချိတ်။ စိုက်ပျိုးခြင်း, မီးသီးစိုက်ပျိုး, Long ကသံမဏိမြက်ခင်းထွန်ခြစ်ကိုင်တွယ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်ဥရောပ, အမေရိကန်, ကနေဒါတင်ပို့နေကြသည်။ ဒါကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ, ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲစျေးနှုန်းများနှင့်ထောက်ထားန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ poleasure ဖြစ်ပါတယ်။
စံပြ Long ကလက်ကိုင်မြက်ခင်းထွန်ခြစ်ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည် Taditional အင်္ဂလိပ်စတိုင်ဥယျာဉ်မြက်ခင်းထွန်ခြစ်အရည်အသွေးကိုအာမခံနေကြသည်။ ကျနော်တို့က Round သွားမြက်ခင်းထွန်ခြစ်၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
သံမဏိဥယျာဉ်လက် Tools များ Trowel နှင့်ချိတ်
ဥယျာဉ်တော် Tools များ Long ကလက်ကိုင်မီးသီးစိုက်ပျိုး
ဥယျာဉ်တော် Yard Nut စုရုံးခြင်း